မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: Honeymoon to New Zealand Day9 (the beginning of South Island): Experiencing Bluebridge Ferry
Honeymoon to New Zealand Day9 (the beginning of South Island): Experiencing Bluebridge Ferry
၁၀ရက် မေလ ၂၀၁၅ (တနင်္ဂနွေနေ့)
Day 8 ပိုစ့်အဆုံးမှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွန်မတို့ရဲ့ တောင်ပိုင်းကျွန်း ခရီးစဉ်ကို စဖို့ ဝါလင်တန်နဲ့ ကပ်ရပ် တောင်ပိုင်းကျွန်းက ပစ်တန် (Picton) ဆိုတဲ့ မြို့လေးကို သင်္ဘောစီးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မနက်စောစော ဟိုတယ် ချက်အောက်လုပ်ပြီး အထုတ်တွေထမ်းထွက်လာတော့ မြို့ထဲက တိုက်စီလေးတွေက လိုက်မလား လက်ထောင်ပြတုန်းက မလိုက်ဘူး ညင်းလိုက်ပြီးမှ။ Mr.Right က တော်ကြာ တစ်ချိန်လုံး သူချည်း အထုတ်ထမ်းရတယ်ဆိုပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေရင် ကိုယ်ပဲ စိတ်ဆင်းရဲရမှာမို့ စိတ်ပြောင်းပြီး ပလက်ဖောင်းမှာ ရပ်ထားတဲ့ တိုက်စီကို ငှားစီးလိုက်ပါတယ်။ တိုက်စီတွေ ဈေးဘယ်လောက်ပေါလဲ ကြီးလဲတော့ ကိုယ်မသိပါဘူး။ အမှန်ဆို ကျွန်မတို့ သွားရမဲ့ နေရာက လမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့ အနေအထားပဲ ဆိုတာ ကျွန်မတို့ သိပေမဲ့ တမင် အပင်ပန်းမခံနိုင်လို့ ငှားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လမ်းကတော့ ဗြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ သူ လမ်းသွယ်ကနေ ပတ်ပြီး အစကပြောခဲ့တဲ့ “ကမ်းနားလမ်း” လို လမ်းကနေ တည့်တည့်ဆင်းတာနဲ့ ၅မိနစ်တောင် မကြာဘူးရောက်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ငှားမိတဲ့ ကားသမားက သိပ်တော့ရိုးသားပုံမရပါဘူး။ ကျွန်မတို့ကို ပတ်မောင်းနေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်တောင် ၁၀မိနစ်မကြာတဲ့ခရီးကို လမ်းလဲ ပိတ်မနေပဲနဲ့ သူကားမောင်းတာ ၁၅မိနစ်လောက်ကြာနေပါတယ်။ ကားခ NZD 8 လောက်ကျပါတယ်။ Mr.Right က ဘာလို့ ကားငှားနေသေးလဲဆိုပြီး အပြစ်ပြောချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး ကျွန်မကိုပြောပါတယ်။ အမှန်တော့ ကိုယ့်အတွက်ထက် သူ့အတွက် ကိုယ့်မှာ ကားငှားရတာပါ။ အိတ်တွေသယ်ပြီး မအီမသာနဲ့ နားညီးမခံနိုင်လို့ လူသက်သာတဲ့နည်းကို ရွေးတာပါ။ ဒါပေမဲ့လဲ သူဒီလောက် ပတ်မောင်းတာတောင် NZD8 လောက်ပဲ ကျတယ်ဆိုတော့ ဝါလင်တန်က တိုက်စီတွေ ဒီလောက် ဈေးမကြီးဘူးလို့ ဆိုရမယ်ထင်တယ်။
ကျွန်မတို့ စီးမဲ့ Bluebridge သင်္ဘောကြီး
သင်္ဘောဆိပ်အကြောင်း ဆက်ပြောရရင်ဖြင့် သင်္ဘောဆွဲတဲ့ company မှာ InterIslander နဲ့ BlueBridge ဆိုပြီး ၂ခုရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့က Bluebridge ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Bluebridge က မနက် ၈နာရီထွက်ပြီး ဟိုကို နေ့လည် ၁၁ခွဲ ရောက်ပါတယ်။ InterIslander က မနက် ၈နာရီ ၄၅ မိနစ်မှ ထွက်တော့ ဟိုကို အနည်းငယ်နောက်ကျရောက်ပါမယ်။ Picton ကနေ Christchurch ကိုထွက်တဲ့ ကားက နေ့လည် ၁နာရီထွက်မှာဆိုတော့ လိုရမယ်ရ စောစောသွားတာကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ Bluebridge က နောက်မှ ဖွင့်တဲ့ လိုင်းသစ်ပါ။ InterIslander က အရင်ဖွင့်တဲ့ လိုင်းပါ။ ခု အင်တာနက်မှာ ဖတ်ကြည့်တော့လဲ Bluebridge ကို ပိုကြိုက်တယ်ပြောကြပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ InterIslander ကို မစီးဖူးတော့ မပြောတတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ Bluebridge ကို စီးခဲ့ရတာတော့ သဘောကျပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ သင်္ဘောစီးကြာချိန်က ၃နာရီခွဲပါ။
အစကတော့ သင်္ဘောကို စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ ထူးခြားလိမ့်မယ်လို့လဲ တွေးမထားမိပါဘူး။ ခါတိုင်းစီးနေကျလို ထိုင်ခုံလေးတွေတန်းစီတဲ့ မော်တော်ဘုတ်သာသာလိုလို ထင်ထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက မော်တော်ဘုတ်သာသာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ကို ဇတ်ဆိပ်နဲ့ သင်္ဘောကြီးပါ ကားပါတဲ့သူတွေဆို ကားတွေပါ တင်သယ်လို့ရတဲ့ Cruise ပုံစံသင်္ဘောကြီးပါ။ သင်္ဘောပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ အကျယ်ကြီး သွားချင်တဲ့နေရာသွားထိုင်ချင်တဲ့နေရာထိုင်လို့ရပါတယ်။ lounge ပုံစံ ဆိုဖာလေးတွေနဲ့ သည်းသန့်ခန်းလေးလိုအခန်းလေးတွေ စားပွဲလေးတွေနဲ့ အခန်းလေးတွေ တီဗွီပြနေတဲ့ ရှေ့မှာလဲ ဆိုဖာတွေနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဟောခန်းလိုမျိုးလဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒိတီဗွီနားမှာ ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိပြီး သင်္ဘောနောက်ထိဆက်လျှောက်သွားရင်တော့ နောက်ထပ် ကန်တင်းလို စားသောက်ဆိုင်အကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ Interlander မှာ တီဗွီမပြဘူးလို့ Tripadviser မှာ သူများတွေရေးထားတာတွေ့ပါတယ်။ သူတို့စားသောက်ဆိုင်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တွေ အာရှအတွေးလို ထမင်းကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်မရှိဘူးပေါ့။ ပေါင်မုန့်မီးကင်၊ ကိတ်မုန့်၊ ကော်ဖီ၊ အင်္ဂလိပ်မနက်စာ ဝက်သားပြား၊ကြက်ဥကြော်လောက်သာပေါ့။ ကော်ဖီ လဘက်ရည်လဲရှိပါတယ်။
သင်္ဘောစီးရတော့ ပျော်တာပေါ့... လေကလဲရှယ်တိုက်တာ။
Lonely... Oh Mr.Lonely ...
Our Breakfast on board with two tea cost about NZD 19
ကျွန်မတို့လဲ အဲ့ဒိကန်တင်းလေးမှာ မနက်စာစားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ Breakfast Set က အကြီးကြီး ကိုယ်လဲ ကုန်မှာ မဟုတ်သလို ကိုယ့်အတွက် အာသာလဲ ပြေမှာမဟုတ်တော့ မစားဖြစ်ပဲ ရိုးရိုး ပေါင်မုန့် မီးကင်နဲ့ ဂျင်သုတ်ပဲ စားဖြစ်တယ်။ Mr.Right ကတော့ Brownie နဲ့ လဘက်ရည်။ ကိုယ့်ဘာကိုယ် အိမ်မှာနေရင် ပေါင်မုန့်မီးကင် ၂ချပ်လောက်ကတော့ စားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လို သူများနေရာရောက်လို့ ကိုယ်စားချင်တဲ့ အစားအစာမျိုး မရှိဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ကြောင့်လားမသိဘူး ပေါင်မုန့်မီးကင်ကြီး စားရမှာကိုပါ ခံတွင်းက မတွေ့လှဘူး။ ဗိုက်ဆာပြီး မူးမှာစိုးလို့ ၁ချပ်နဲ့ နောက်တစ်ချပ်ကို အနားသားတွေဖယ်စားပြီး ထားခဲ့တယ်။ အဲ့ကန်တင်းက စားပွဲပေါ် Gopro မေ့ကျန်ခဲ့လို့ ထွက်သွားပြီးမှ အမြန်ပြေးယူရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မပျောက်ပါဘူး။ အဲ့နားလေးမှာ အဲ့အတိုင်းလေးပဲရှိနေတယ်။
သင်္ဘောပေါ်မှာရှိတဲ့ ခုံက ပါလာတဲ့ ခရီးသည်ထက် များတော့ အားလုံးလောက်လောက်ငှငှနဲ့ ထိုင်စရာ နေစရာပေါပါတယ်။ နယူးဇီလန်ကိုသွားရတာရဲ့အဓိက ကောင်းချက်က ဘာလုပ်လုပ် ဘယ်သူနဲ့မှ လုယက်လုပ်စရာမလိုပဲ အရာရာတိုင်းက အေးဆေးနေလို့ပါပဲ။ တစ်ခုပဲ ကိုယ်ကသာ အချိန်မှန်ပါစေ။ ကားဂိတ်တွေဘာတွေဆို ၁၅မိနစ်စောရောက်နေပါစေ။
သင်္ဘောစီးရတဲ့ အတွေ့အကြုံမှာ ဘာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုရင်တော့ Deck ကိုထွက်ပြီး ရှုခင်းတွေကြည့်ရတာကိုပါပဲ။ ရှုခင်းတွေလှတာကို ကျွန်မ စကားလုံးတွေနဲ့ စာဖွဲ့ဖို့ မှီမယ်မထင်ပါဘူး။ တခါတခါဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Pirate of the Caribbean တို့ထဲက ဂန္ဘီရ ဆန်ဆန် ပင်လယ်ကြီးထဲပဲ ရောက်နေသလိုလို။ အိပ်မက်လိုလိုတောင် ခံစားရပါတယ်။ သင်္ဘောရှေ့ဘက်ပိုင်းကတော့ လေအတော်ပြင်းပြီး ချမ်းစိမ့်နေတာပါပဲ။ ကျွန်မတို့ က အနောက်ဖက်ခြမ်းကို မသွားကြည့်သေးပဲ။ ရှေ့ဘက်ခြမ်းကို အတော်ကြိုက်ပြီး အချမ်းဒဏ် လေဒဏ်အတော်ခံပြီး နေလိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ ရှေ့ဆက် ခရီးပန်းအုံးမှာသိလို့ နည်းနည်းအနားယူတာကောင်းတယ်ဆိုပြီး တီဗွီရှိတဲ့ lounge က ဆိုဖာ အရှည်ရှိတဲ့ခုံလေးမှာထိုင်နေလိုက်တယ်။ သင်္ဘောပေါ်မှာ Free wifi လဲရတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်မလဲ တစ်ချို့ tourist တွေလို ဆိုဖာပေါ်မှာ ခဏအိပ်ပျော်သွားပါသေးတယ်။ နောက် နိုးတော့ တီဗွီထိုင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ခဏနေတော့ ပျင်းလာတာနဲ့ သင်္ဘောနောက်ဖက်ခြမ်းအထိလျှောက်ကြည့်တော့မှ အဲ့ဒိဘက်မှာ လေညိမ်ပြီး နေသာတော့ တော်တော်များများ နေပူဆာလှုံပြီး အပြင်မျာ ထိုင်နေကြတာတွေ့တယ်။ ကမ်းလဲ ကပ်ခါနီးနေပြီဆိုတော့ Mr.Right ကို ပြန်သွားခေါ်ပြီး အဲ့မှာ သွားထိုင်နေပါတယ်။
သူမရိုက်ချင်လဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် selfie ဆွဲတယ်ဗျာ... ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Entertain ပြီး ပျော်အောင်နေရတယ်... သိတယ်ဟုတ်...
အဲ့သင်္ဘော အရှေ့ပိုင်းမှာ လေတအားတိုက်တာ။ လူတောင်လွှင့်တော့မလား ထင်ရတယ်။ တကယ်...
Lounge ထဲက တီဗွီပြနေတဲ့ နေရာ
Mr.Right နဲ့ ကျွန်မ စတည်းချလိုက်တဲ့ နေရာ... အဲ့ဆိုဖာပေါ်မှာ ကျွန်မကတော့ အိပ်ပျော်သွားသေးတယ်။
တောင်ကြားပင်လယ်ပြာက ဖြတ်မောင်းခဲ့တဲ့ ရှုခင်းအလှ၊ ရာသီဥတု အေးအေးနဲ့မို့ Wellington ကနေ Picton ကိုသွားတဲ့ Cook Straight ရေလက်ကြားခရီးစဉ်ဟာ Bluebridge Ferry ပေါ်မှာ အတော်လေးကို စိတ်လှုပ်ရှား သာယာတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပါပဲ။
နောက်ဘက်က နေသာသာ လေငြိမ်ငြိမ်နေရာလေး...
ပင်လယ်ပြာပြာ ကောင်းကင်ပြာ... ဥတုအေးအေး... ချမ်းတုန်ကွေး...
For me, it looks magical
Picton ဆိပ်ကမ်း ကိုကပ်လာပါပြီ...
သင်္ဘောက အချိန်မှန်ပဲ Picton ဘက်အခြမ်းကိုရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Bluebridge ဆိုဒ်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းက ကျွန်မတို့ intercity bus ရပ်တဲ့ ဂိတ်ရှိတဲ့ ဆိပ်ကမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ အစကတော့ စိတ်ပူသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်္ဘောပေါ်ကလူတွေလဲ ကိုယ့်လိုပဲ Intercity bus စီးကြမဲ့သူတွေပါပါတယ်။ မသေချာလို့ ကောင်တာမေးကြည့်တော့ အဲ့ဒိမှာ Free Shuttle bus Bluebridge ferry က ဆွဲပေးတယ်တဲ့။ အဲ့ဒိကားကိုစီးလိုက်ရင် Intercity bus ထွက်တဲ့ isite ရှိတဲ့ နေရာကို ရောက်တယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ အဲ့ဒိ Free shuttle bus တက်စီးပြီး isite ဘက်ရောက်တော့ intercity ကားတစ်စီးရပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကားပေါ်မှာတော့ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ ကားနားမှာလဲ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ရောက်တဲ့အချိန်က ၁၁နာရီ ၄၅မိနစ်လောက်ဆိုတော့ ပြောရမယ်ဆို နောက်မကျပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီကားက ကျွန်မတို့ရှေ့တစ်စီးထင်တာပါ။ အစကတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းထိုင်စရာရှိမဲ့ လေအကွယ်လေးမှာ သွားစောင့်နေသေးတယ်။ နောက်တော့ သေချာအောင် အဲ့ ဘတ်စ်ကားနားပဲ ပြန်စောင့်ဖြစ်တယ်။ တစ်ချို့က အဲ့နားမှာ ခရီးသွားအိတ်တွေကို လူကိုယ်စား ချပြီး တန်းစီနေကြပြီလေ။ ကိုယ်လဲ ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပေမဲ့ တန်းစီထားလိုက်တယ်။ အဲ့နားတဝိုက်မှာ စားသောက်ဆိုင်လို ထိုင်စရာလဲ နီးနီးနားနားမတွေ့တော့ နေ့လည်စာလဲ မစားဖြစ်ဘူး။ ဘယ်အချိန်မှ ကားထပ်ရပ်ပေးပြီး စားရမလဲ လဲ မသေချာဘူး။ အစက ၁၁ခွဲရောက်ပြီး ဘတ်စ်ကားစောင့်နေတဲ့အချိန် နေ့လည်စာစားမလို့ စဉ်းစားထားတာ။ ခုတော့ ဆိုင်တွေက Picton မြို့ထဲ ဝင်မှ ရှိမှာဆိုတော့ အဲ့လောက်တော့ အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူး။ နည်းနည်းလေး စဉ်းစားဖို့ ကျန်သွားတော့ ကိုယ်မှန်းတာနဲ့ ကြုံတာတွေ လွဲနေရော။ အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဟိုမုန့်လေးတွေ့လဲ မလွှတ်ပြစ်ပဲ အိတ်ထဲထည့်ယူလာ။ ဒါလေးလဲ အိတ်ထဲထည့်သိမ်းလာ။ စတာတွေက အသုံးဝင်တာပဲ။ မဗေဒါက ကိုယ့်စိတ်ကြောင့်သာ တစ်ခါတစ်လေ ဗိုက်ဆာမှန်းမသိရင်နေမယ်။ တကယ်ဗိုက်ဆာပြီဆို ဘာမှ ဆက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ picton ရောက်တဲ့အထိတော့ ကိုယ်လဲ ဗိုက်သိပ်မဆာသေးဘူး။
ကမ်းကပ်နေပါပြီ... နောက်က အဖုံးကြီး ချတော့မယ်...
ဒါက Free Shuttle Bus စီးပြီးမှ ရောက်တဲ့ နေရာ။ ကြည့်ရတာ InterIslander သင်္ဘောဆိပ်ကျတော့ ဒီမှာထင်တယ်။
နောက်ကျတော့ အဲ့ဒိမှာ ရပ်ထားတဲ့ ကားကြီးကပဲ ကျွန်မတို့ စီးရမဲ့ကားပါ။ မောင်းတဲ့သူရောက်လာတော့မှ နာမည်စာရင်းကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကားမှန်းသိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ Picton ကနေ Christchurch မြို့ကို ခရီးဆက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။
Christchurch မြို့လေးကို ခရီးဆက်ပါအုံးမယ်နော်...
New Zealand Visa Application for Myanmar passport holder
Honeymoon to New Zealand: Day1
Honeymoon to New Zealand: Day2
Honeymoon to New Zealand: Day3
Honeymoon to New Zealand: Day4
Honeymoon to New Zealand: Day5
Honeymoon to New Zealand: Day6 (Part 1)
Honeymoon to New Zealand: Day7
Honeymoon to New Zealand: Day8
I wish all my readers to haveahappy and prosperous new year 2016!!!
Posted by mabaydar at 4:14 PM
Labels: My Honeymoon , New Zealand , ခရီးသြားမွတ္တမ္း
လွလိုက္တာ။ ႐ႈခင္းေလးက။ ဟီး ။ တခါတေလ အဲ့လို သင္းေဘာ အၾကီးၾကီး ခဏေလာက္စီးျပီး ပတ္ပတ္လည္ ႐ႉခင္းလွလွေတြ ေလွ်ာက္ၾကည့္ခ်င္တယ္။ (star cruise လို အၾကာၾကီးလဲ မစီးခ်င္ဘူး။ လိႈင္းမူးမွာစိုးလို႕) ရာသီဥတု ေအးေအးေလးနဲ႕ ေနအရမ္း မပူရင္ Perfect ေပါ့။
12/31/2015 11:44 PM
Happy new year Ma baydar!!
Thanks for the new post. I also love taking cruise !!
Can't wait for next post!!
See you in 2016 !!
12/31/2015 11:47 PM
Honeymoon to New Zealand Day9 (the beginning of So...
Honeymoon to New Zealand (Day 8) - Out and about i...